इर्लिङ हाल्याण्ड र केलियन एमबाप्पेले यस हप्ता च्याम्पियन्स लिगमा लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई ओझेलमा पारे। बार्सिलोनाका कप्तान मेसी र म्यानचेस्टर युनाइटेड तथा रियल मड्रिडका पूर्व खेलाडी रोनाल्डोले विश्व फुटबलका एक दशकभन्दा बढी एकछत्र राज गरेका थिए। तर, हाल दुबै खेलाडी च्याम्पियन्स लिग जित्नका लागि संघर्षरत दुई टोलीबाट खेलिरहेका छन्। त्यो पनि अगन्य गोलस्कोरिङ रेकर्डमा साथ।
पेरिस सेन्ट जर्मनका फरवार्ड एमबाप्पे प्रि–क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा बार्सिलोनाविरुद्ध ह्याट्रिक प्रहार गरे। जुन खेलमा पिएसजीले बार्सिलोनालाई ४–१ गोलले पराजित गरेको थियो। त्यस्तै, बोरुसिया डर्टमण्डका फरवार्ड हाल्याण्डले प्रि–क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा सेभिल्लाविरुद्ध २ गोल गरे। उक्त खेलमा डर्टमण्डले सेभिल्लालाई ३–२ गोलले हरायो। उता, पोर्टोसँग खेलको युभेन्टसले २–१ को हार बेहोर्‍याे। रोनाल्डोले युभेन्टसको लागि गोल गर्न सकेनन्। त्यस्तै, पिएसजीविरुद्धको खेलमा मेसी पनि जादुमय खेल पस्किन असफल भए।
विश्व फुटबलले खोजेको नयाँ प्रतिद्वन्द्व यही हो?
मेसी र रोनाल्डोले पछिल्ला १२ मध्ये ११ बालोन डी ओर जितेका छन्। जुन अवार्ड विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीलाई दिइने चलन छ। रोनाल्डो फुटबल इतिहासमा सर्वाधिक धेरै अफिसियल गोल गर्ने खेलाडी हुन्। उनी च्याम्पियन्स लिगको इतिहासका सर्वाधिक गोलकर्ता पनि हुन्। मेसी ला लिगाको सर्वकालिन् सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। उनले सुपर कपसहित ३४ ट्रफीहरु जितेका छन्।
एमबाप्पे केही समय ‘उदीयमान विश्व उत्कृष्ट खेलाडी’ भनेर चिनिएका थिए। पिएजसीले उनलाई दोस्रो सबैभन्दा महँगो खेलाडी बनाइदियो। २२ वर्षकै उमेरमा उनी पिएसीका लागि सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने तेस्रो खेलाडी बनिसकेका छन्। उनी फ्रान्सलाई विश्वकप जिताउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने खेलाडी पनि हुन्।
तर, हाल्याण्डको केही आश्चर्यजनक छ। गत सिजनको च्याम्पियन्स लिगमा शससनीपूर्ण गोल गर्नुअघि २० वर्षका हाल्याण्ड उनको देश नर्वेबाहेक बाहिर चिनिएका थिएनन्। उनले च्याम्पियन्स लिगको १३ खेलमा १८ गोल गरिसकेका छन्। कुनै पनि खेलाडीले २० खेलमा पनि उक्त संख्यामा गोल गर्न सकेका छैनन्।
‘यसको मतलव हामीले मेसी र रोनाल्डोपछि हेर्नका लागि अर्को एक जोडी पाएका छौं,’ ग्यारी लाइनकरले भने। ‘एक रात एमबाप्पेले मेसीलाई छायाँमा पारे अनि अर्को रात हाल्याण्डले रोनाल्डोलाई,’ म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्व डिफेन्डर रियो फर्डिनाण्डले भने।
‘यो फुटबल हस्ती परिवर्तनको संकेत हो,’ उनले भने, ‘यो फुटबलमा अर्को प्रतिद्वन्द्व हो जुन १० वर्षसम्म चलेछ।’
‘मेसी र रोनाल्डोले शुरुवात फुटबल खेल्दै गर्दा हामीले यही संख्यामा गोलहरु देखेनौं। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के भने भने हाल्याण्ड र एमबाप्पेले अझै खेल सुधार्नेछन्,’ चेल्सीका पूर्व मिडफिल्डर जोइ कोलले भने।
चार खेलाडीलाई कसरी तुलना गर्ने?
गत सिजनको शुरुवात देखि नै चार खेलाडीहरु उच्च प्राथमिकताको साथ हेर्न थालिएको छ। सिजन २०१९–२० देखि हालसम्म घरेलु लिग र च्याम्पियन्स लिग गरी समग्रमा उनीहरुको प्रदर्शन यस्तो छः
रोनाल्डो मेसी हाल्याण्ड एमबाप्पे
दुई नयाँ युवाको जोडीले गत सिजनदेखि अहिलेसम्म च्याम्पियन्स लिगमा २८ गोल गरिसकेको छ भने मेसी र रोनाल्डोको जोडीले १५ गोल गरेको छ।
#लियोनल_मेसी #क्रिस्टियानो_रोनाल्डो #च्याम्पियन्स_लिग #केलियन_एमबाप्पे
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ६, २०७७ १२:५९